छविराज ओझा कसरी भए रजनीको गड फादर ! (अन्तरगं कुराकानी)-Nagarikaawaj.com
छविराज ओझा कसरी भए रजनीको गड फादर ! (अन्तरगं कुराकानी)
शुक्रबार, पुस १९, २०७०
रजनी के.सी. नेपाली रजतपटमा पछिल्लो समय देखिएकी अभिनेत्री हुन् । निर्माता छबिराज ओझाको पछिल्लो चलचित्र लज्जामार्फत उनि रजतपटमा उदाएकी हुन् । अभिनेत्री रेखासँगको खटपटका कारण आफ्नो पछिल्लो चलचित्र लोफरमा नया हिरोइन भित्र्याउने सिलसिलमा रजनिलाई ठुलो पर्दामा पाईला चाल्ने मौका दिएका हुन । नेपाली फिल्मी ईष्ड्रस्टिजमा केही गर्ने जोश जागरले आएको वताउने नायीका रजनी केही समयमै अर्को चलचित्रमा पनि काम गर्ने वताईन् । नायीका रजनीसँग रामजी ज्ञवालीले गर्नुभएको अन्तरगं कुराकानी ।
जाडो मौसममा सवैभन्दा मन पर्ने खानेकुरा ?
– मःमः। एकदमै मनपर्छ ।
मःम वनाउन जान्नुभएको छ ?
– नाई आउदैन । खाम मात्रै आउँछ भन्या । हाहाहा…
के वनाउन जान्नुभएको छ त ?
– अचार वनाउन जानेकी छु । घरमा मम्मीवाट सिकेकी हुँ । आलुको मिठो अचार वनाउछु ।
जाडो मौसममा घुम्न मनपर्ने ठाउँ ?
– मलाई नेपालका मनपर्ने स्थानहरु पोखरा, धरान र ईलाम हुन । पोखरा गईसकेकी छु । अन्य दुई स्थान चाहि अहिलेसम्म गएकी छैन । चाडैनै जाने सोचमा छु ।
आफ्नो वारेमा कसैलाई अहिलेसम्म थाहा नभएको एउटा कुरा ?
– म चलचित्र क्षेत्रमा आउँछु भन्ने कसैलाई पनि थाहा थिएन । अध्ययन क्षेत्रमा मात्रै ध्यान थियो । सानोमा चलचित्र क्षेत्रमा जाने सोच एकदमै थियो । तर यो कुरा अहिलेसम्म कसैलाई पनि भनेकी थिईन ।
अन्य नायीकाहरुमध्ये तपाई के कुरामा फरक छु जस्तो लाग्छ ?
– म अरु नायीकाहरुसँग त्यत्ती तुलना गर्दिन र कम्पेयर गर्न रुचाउँदिन पनि । तर म आफुलाई १०० प्रतिशत विश्वास गर्छु । चलचित्र क्षेत्रमा भ्रखरै सुर गरेपनि भविष्यमा राम्रो नायीका वन्नेछु । मैले गरेका कामहरुमा म एकदमै सन्तुष्ट छु ।
तपाईका सवैभन्दा मिल्ने दुई सारथीको नाम लिनुप¥र्यो भने ?
– रिदीमा श्रेष्ठ र भुवन अधिकारी ।
उनिहरुका एक एक वटा मनपर्ने र मन नपर्ने वानी वताउनुसन् ?
– भुवनको मनपर्ने वानी मलाई सधैभरी सहयोग गर्नुहुन्छ । दुःख सुःख जेमा पनि साथ दिनुहुन्छ । कहिले काही केही कुरामा कन्फ््युजमा भए भने आँट दिनुहुन्छ । सहयोग गर्ने वानी धेरै मन पर्छ भने उस्ले आफ्नो गर्लफ्रेण्ड र अन्य युवतिहरुलाई चाहि सधैजसो मज्जाक मात्रै सोच्छ, कहिल्यै सिरीयस लिदैन् । त्यो वानी मन पर्दैन । रिदीमाको मनपर्ने वानी कलेज लाईफदेखी हरेक कुराहरु सेयरिङ गर्छौ हामी । कहिल्यै केही कुरा ढाट्दिनन उनले । कहिलेकाही मलाइ गाली गरेर पनि सम्झाउँछिन भने मननपर्ने वानी सवैलाई चाडै विश्वास गर्छिन् । यो सुधार्नुपर्छ ।
चलचित्र क्षेत्रमा आउनलाई सवैभन्दा ठुलो हात कस्को होला ?
– छविराज ओझानै हुनुहुन्छ ।
उहाँलाई तपाईले कसरी सम्वोधन गर्नुहुन्छ ?
– गड फादर हुनुहुन्छ । यहि भनेर सम्वोधन गर्छु ।
उहाँले चाहि तपाईलाई ?
– हाहाहा….(लामो हासो) । के भन्नु नी रजनी जि भन्नुहुन्छ । अरु त भन्नै भएननी ।